faa’iidada ugu wanaagsan ee ay leedahay waxbarashada | Somali National Television - sntv.so
Home MAQAALLO faa’iidada ugu wanaagsan ee ay leedahay waxbarashada
faa’iidada ugu wanaagsan ee ay leedahay waxbarashada
Muqdisho September 29 (SNTV):- Waxbarashadu waa hubka ugu awoodda badan xaalad kasta ee jirta. Marka xaqiiqda laga hadlayo, qalin biiraha iyo qalin tiraha/qoriga waxa ay ka awood badan yihiin xabadda/qoriga iyo midida.
Jahada aad waxbarashadda ka bilaabeyso waxa ay go’aamisaa mustaqbalka noloshaada, mar aad dib u eegto 50-sano ama 70-sano, dad badan ayaa ka badbaaday aqoon la’aanta. Marka aad eegto tartanka ardayda aduunku ay sameyneyso, waxa aad dareemeysaa in lagu kala horeeyo agabka waxbarasho ee la helayo.
Haddii ay dooneyso maskaxdaadu iney ilaaliso mustaqbalkaada waa iney markasta su’aal is weydiisaa. Qofku haddii uu doonnayo inuu waxbarashadda ka guul-gaaro fadla, wax u baro si xariira.
Waxaad heleysaa xushmad/tixgalin kaaga imaaneyso qof kasta iyo meel kasta
Xushmadu waa keyd ugu qiimaha badan noloshaada. Waxbarashadu waa furaha ugu awoodda badan kaas oo lagu sameeyo xushmaddaha kale.
Haddii aad tahay qof aqoon leh, waxa aad heli doontaa tixgalin taasoo kaaga imaaneyso qof kasta iyo meel kasta. Dabcan, bulshadu way tixgalisaa qofka taajirka ah waliba si wanaagsan, laakiin meelkasta laguma tixgaliyo. Marka ugu horeyso ee aad dad la kulanto, ayagu kuma weydiinayaan waxa aad qabato? Sida xaaladdada, laakiin dadku waxa ay qiyaasaan xirfaddaada. Haddii aad dooneyso inaad noqoto qof xirfad wanaagsan waxa aad u baahan tahay inaad si fiican wax u barato. Sidaa awgeed waxbarashadu waxa ay si fudud kuu siisaa tixgalin dadka ay ku tixgalinayaan.
Bal maley Bill gate waxa uu ku dhacay jaamacadda HARVARD UNIVERSITY, laakiin hadda waxa uu kamidyahay dadka ugu tixgalinta badan caalamka, Waxa uuna ku muteystay waxa uu kusoo kordhiyay caalamka manta casriga ah. Laakiin ogow Bill gate ma uusan eheyn jaahil, waxa uu qiimahaas ku muteystana waa aqoontiisa uu ficil u beddelay.
Steve Jobs waxa uu ku dhacay koleyjka REED COLLEGE, laakiin waxa uu ka mid ahaa aas’aasayaashi shirka Apple shirka daasoo ilaa iyo manta ka midda shirkaddaha lagu riyoodo caalamka.
Ku fikir waligaa kaliya hab aan dadka kale suura gal la noqoneyn laakiin aad adigu suura galin laheyd. Laakiin sabab aad adigu ugu cabir qaadataa kaliya 0.0001 boqolkiiba? Tusaale cabirka dadka lake waa 99.9999 boqolkiiba. Inta badan dadka dunida ku nool cabirkooda ka qaataan inta ay la egtahay tixgalinta ay dadku siiyaan, xirfadooda ayaga.
Waxbarashadu waxay beddeshaa caadooyinkada/dhaqamadaada
Ma heleysid meel ka wanaagsan Iskoolka kaasoo aad ku baraneyso dhaqamada asaasigaa. Shay kasta oo aad ku baraneyso Iskoolka waxa uu saameyn adag ku yeelanayaa noloshaada maalin laha ah. Waxbarashadu kaliya ma afayso maskaxadda laakiin sidoo kale waxay afaysaa caadooyinka xun xun. Marka aad la kulanto Ajnabi, waxa aad awood u leedahay inaad xukunto caadooyinkiisa kaliya, sidoo kale waxaa muhiima asluubtiisa shaqsiyadeed, waxaa kale oo adiga kugu filan kaliya dadka aqoonta leh.
Shaqo ayaad ka heleysaa meel kasto
Waxaa jiro habab lacag loo sameeyo, annaga waxaa nagu waajiba inaan shaqa fiican la imaano. Hadda kaba soo qaad maalinkasta waxaa soo qalin jabiyo arday xaqiiqatan si adag ayey shaqo u raadinyaan. Sidaas awgeed dadka aanm waxbaran sidey shaqa u raadinayaan? Waxbaradu waxay u baahan tahay qaabki aad ugu gudbi laheyd tilaabadda xigto. Haddii aad heysato Bachelor, Diploma ama shahaadda kale, waxaad heli doontaa shaqo meel ay ahaataba, laakiin wax ka hooseeyo lama sheegi karo waqtigaan la joogo. Haddii aadan heysan wax shahaadda ah sidee u rabee shaqo xafiiseed. Kaliya waxaad qaban kartaa shaqooyinka aan xirfadda aqooneed u baahneyn sida xamaaliga, si aad uga dhacsato noloshaada maalin laha ah. Qaarada aasiya xitaa ma heleysid shaqada xamaaliga ah haddii aadan wax shahaada ah wadan. Sidaa darteed bal ka fikir faa’iidada wax barashada ay u leedahay noloshaada ha noqonin waligaa jaahil xitaa in yar oo noloshaada ka mida.
Waxbarashadu waxay sameysaa saaxiibo
Waxaa jiro farqi badan oo u dhexeeyo saxiibtinimadda, sida saaxiibadii sanaddii 1994 iyo saaxiibadda 2018. Waayadii hore waxbarashadu ma eheyn wax ay sidaas ugu sii weyn tahay sameysashada saxiibo. Laakiin hadda waxaa muhiim ah iney kugu hareereysan yihiin saaxiibo heerkoodda aqooneyd sareyso. Aniga maka hadlaayi dhammaan dadka dunida ku nool, laakiin waxaan ka hadlayaa inta ugu badan dadkaas. Sida loo sameysto saxiibo cusub, waa inaad la saaxiibtaa dadka aqoonta leh ama dadka dhaqaalaha leh. Haddii aadan laheyn mid ka mida labadaan, waxa ay noqoneysaa si fudud in leesaga ka tuuro. Runtii wax murugoonayaa laakiin nolosha aduunyadaan waxa aan ku noolaaneynaa manta oo kaliya.sidaas awgeed sameyso saxiibo cusub kuwaasoo leh faa’iido aqooneed.
Maamulida waqtigaada/lacagtaada waa laba arrimood oo muhiima maanta iyo nolosha maalin laha ah. Laakiin aqoon la’aan, way adag tahay in loo maamulo waqtiga iyo lacagta si xirfad leh. Labadaan aaladood waxa ay sameeyaan noloshaada si fudud waliba.
Previous articleWasiirka waxbarashada Soomaaliya oo kulan sagootin ah u sameeyay danjirihii hore ee Suudaan u fadhiyay Soomaaliya
Next articleWasaaradda howlaha guud oo shirkadaha dhismaha kala shirtay barnaamijka isxilqaan